Suar/3 in 1 ကော်ဖီ/မျိုးစေ့/လက်ဖက်ရည်ချောင်း အိတ် granule packing machine ခွက်ဖြည့်စက်
Granule Packing Machine သည် ဆေးဆိုင်၊ အစားအစာ၊ အိမ်သုံးဓာတုပစ္စည်းများ၊ ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များနှင့် အခြားအထူးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလျော့ရဲသောအမျိုးအစား granule ပစ္စည်းများအတွက် သင့်လျော်သည်။အစေ့များ၊ တရုတ်ဆေးများ၊ အစားအစာများ၊ ဆေးဖက်ဝင်အစေ့များ၊ ဆား၊ သကြား၊ ဟင်းချိုရောစပ်ထားသော၊ oat၊ လက်ဖက်ခြောက်၊ တက်ကြွသောကာဗွန်၊ ဆေးမှုန့်၊ အခြောက်ခံစက်၊ စသည်တို့။
စက် အလိုအလျောက် Granule ထုပ်ပိုးစက်
ထိန်းချုပ်မှု PCB Panel ဖြင့်
အတိုင်းအတာ ဖလားအမျိုးအစား(1-80ml ခြောက်ခွက်၊ 50-330ml ညီတူလေးခွက်)
ဖြတ်တောက်ခြင်းအမျိုးအစား ဖြောင့်ရှုး သို့မဟုတ် ဇစ်ဇတ်ဖြတ်စက်
တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။ အလျားလိုက်sealer: လိုင်း သို့မဟုတ် ကွက်အမျိုးအစား ဒေါင်လိုက်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း-လိုင်း သို့မဟုတ် ကွက်အမျိုးအစား
Speed 40-60bag/min (ထုတ်ကုန်ပေါ်မူတည်၍)
အိတ်အရွယ်အစား W: 10-140mm (အိတ်ဟောင်းကို ပြောင်းလဲခြင်း)L:30-150mm (ချိန်ညှိနိုင်သော)
ဗို့အား 220V/ 380V သို့မဟုတ် လျော်ညီစွာ ပြုလုပ်ထားသည်။
အလေးချိန် 280 ကီလိုဂရမ်
Maတရုတ်အရွယ်အစား L×W×H- (၉၆၀x730x1၉၂၀)မီလီမီတာ
ပါဝင်ပါသည် အင်ဗာတာ၊ ဓာတ်ပုံအာရုံခံကိရိယာ၊အိတ်ဟောင်းတစ်လုံးနှင့် ထုထည်ခွက်တစ်ထည်၊ ရက်စွဲကုဒ်ရေးသည့် ဖဲကြိုးပုံနှိပ်စက်တစ်ခု
ရွေးချယ်ခွင့် PLC Touch Screen (Xinje အမှတ်တံဆိပ်)
1. Dual frequency ပြောင်းလဲခြင်း ထိန်းချုပ်မှု၊ အိတ်အရှည်ကို အဆင့်တစ်ဆင့်တွင် ဖြတ်တောက်နိုင်ပြီး အချိန်နှင့် ဖလင်ကို ချွေတာနိုင်သည်။
2. အင်တာဖေ့စ်သည် လွယ်ကူမြန်ဆန်သော ဆက်တင်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပါရှိသည်။
3. မိမိကိုယ်ကို ချို့ယွင်းမှု ရောဂါရှာဖွေခြင်း။ပြတ်တောက်မှုကို ရှင်းလင်းပြသခြင်း။
4. ပိုမိုတိကျမှုအတွက် အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားသော photoelectric မျက်လုံးအရောင်ခြေရာကောက်၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းတံဆိပ်ခတ်ခြင်းဆိုင်ရာ နံပါတ်ထည့်သွင်းခြင်း
5. အပူချိန် သီးခြား PID ထိန်းချုပ်မှု၊ မတူညီသော ပစ္စည်းများကို ထုပ်ပိုးရန်အတွက် ပိုမိုသင့်လျော်သည်။
6. ဓား သို့မဟုတ် ဖလင်ကို အလဟဿမဖြုန်းတီးဘဲ ရပ်တန့်ထားသောလုပ်ဆောင်ချက်။
7. ရိုးရှင်းသောမောင်းနှင်မှုစနစ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ဆောင်မှု၊ အဆင်ပြေသောထိန်းသိမ်းမှု။
8. ထိန်းချုပ်မှုအားလုံးကို ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြင့် နားလည်နိုင်ပြီး၊ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ချိန်ညှိခြင်းနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်မြှင့်တင်မှုအတွက် လွယ်ကူသည်။
သင့်ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်၊ အိတ်တစ်ခုစီ၏အလေးချိန်နှင့် အိတ်ပုံသဏ္ဍာန်တို့နှင့်အညီ သင့်အတွက် quotation ပြုလုပ်ပါမည်။ထို့နောက် ရုပ်ရှင်၏ ပစ္စည်းနှင့် အထူ၊ သင့်တွင်ရှိပြီးသား အိတ်အရွယ်အစား သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ရန် လိုအပ်သည်၊ ဘာသာစကားကို လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ရန်၊ မည်သည့်ဗို့အားကို ဒေသတွင်းတွင် ထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
အာမခံ- ၀တ်ဆင်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများမှလွဲ၍ 1 နှစ် (Cutter၊ Belt၊ Horizontal and Vertical Heating Tube စသည်တို့) အစိတ်အပိုင်းအများစုသည် အခမဲ့ အစားထိုးခြင်းဖြစ်သည် (PLC၊ Servo controller၊ Servo motor၊ Touch screen၊ ဆလင်ဒါ)။စက်ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးမည့် ကိရိယာပုံး ပါရှိပြီး အချို့သော အစိတ်အပိုင်းများကို အခမဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
လည်ပတ်မှုလေ့ကျင့်ရေး- 1: စက်သည် လည်ပတ်ရန် အလွန်လွယ်ကူသည်၊ လက်စွဲဖြင့် ပေးပို့သည်၊ စက်ကို တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် တပ်ဆင်သည့်အခါတွင် ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယို အများအပြားကို ကမ်းလှမ်းသည်။2: ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသင်ယူမှုမှကြိုဆိုပါသည်။3- နိုင်ငံခြားတွင် စက်ယန္တရားများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သော အင်ဂျင်နီယာများ။
ယခင်- 1 ဂရမ်2ဂရမ်5ဂရမ် 10 ဂရမ် သကြား / ဆား ketchup ထုပ်ပိုးစက်
နောက်တစ်ခု: နှစ်ဆအတိုင်းအတာဖြင့် Granule နှင့် Powder Packing Machine
1g 2g 5g ဆားထုပ်ပိုးစက်
5g 10g သကြားထုပ်ပိုးစက်
အလိုအလျောက်ဒေါင်လိုက် Granule ထုပ်ပိုးခြင်းစက်
ဒေါင်လိုက် Roll Film Granule Packing Machine
ဒေါင်လိုက် အဝိုင်းထောင့် ကော်လာဂျင်မှုန့် 1-50g...